हाम्रो जीवन सबै प्रकारका कार्यक्रमहरू भरिएको छ जुन एक तरिका वा अर्को, यसको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्दछ। निस्सन्देह, दोस्रो शताब्दीका आमाबाबुसँग पहिलो परिचय धेरै महत्त्वपूर्ण र महत्त्वपूर्ण घटनाहरूमध्ये एक हो।
एक जना मानिसको आमाबाबु संग अक्वायन्ट
एक दिन एक दिन एक जवान मान्छे आफ्नो परिवारमा पेश गर्न चाहन्छु। निस्सन्देह, यो क्षण रोमाञ्चक छ, तर यो कम कम सुखद छैन। सबै पछि, यस कदमले केवल तपाईंको सम्बन्ध एक गुणस्तर नयाँ स्तरमा बढिरहेको छ भन्न सक्छ, अधिक गम्भीर र महत्त्वपूर्ण। त्यसोभए उत्तेजना बुझ्न सकिने छ, तर यो यसको मूल्यको लागी छैन र धेरै कम यस्तो बैठकबाट बच्न। तपाईंको प्रेमी प्रेमी सुन्न र खुशी नगर्ने हो कि तपाई यो बैठक चाहनुहुन्न, किनकि उहाँ हुनुहुन्छ। तथापि, यदि तपाईं अझै पनि त्यस्तो कदमको लागि तयार हुनुहुन्न भने, तपाईलाई सच्याएर कुरा गर्न र आफ्नो भावनालाई व्याख्या गर्नु पर्छ, मायालु व्यक्तिले तपाईंलाई बुझ्दछ।
तर यदि तपाईंले अझै निर्णय गर्नुभयो भने, तपाईंले आफैलाई परिचित गर्नु पर्छ केही नियमहरूसँग एक पुरुष वा दुल्हनको आमाबाबुलाई डेटिङ गर्नको लागि:
बैठक अघि आफ्नो युवा व्यक्तिलाई आफ्नो आमाबाबुको बारेमा केही पत्ता लगाउन अघि: उनीहरूको मनपर्ने के हो भने, चरित्रको लक्षणहरू के हो। यो अझै अजनबारीको बारेमा जान्नको लागि मानसिक रूपमा तयार हुन यो उपयोगी हुनेछ।
एक बैठकमा स्वाभाविक रूपमा व्यवहारमा, आफैलाई एक व्यक्ति बनाउन को लागी प्रयास नगर्नुहोस् जो होइन। मूर्खतालाई सधैं महसुस गरिन्छ र लगभग सधैँ नकारात्मक हुन्छ।
यद्यपि, विनम्र र मुस्कुराउनुहोस्। एक मुस्कानले सधैं असहमति गर्छ र सुखद संचारमा अवरोध गर्दछ।
संगठनको लागि, त्यसपछि यो मौसमको लागि पोशाक र अवस्थाको आधारमा लायक छ। कपडा छनौट गर्नुहोस् जुन तपाईं सहज महसुस गर्नुहुन्छ, तर एकैचोटि सुन्दर र सभ्यमा।
आमाबाबुसँग कुरा गर्दै तपाईंको छनौटको बारेमा जान्नको लागि उत्कृष्ट अवसर हो कि उनको बचपन वा युवाहरूको कुनै रोचक विवरण यो प्रयोग गर्नुहोस्।
याद राख्नुहोस् कि यदि यो महिला र पुरुषले यस्तो अद्भुत छोरा उठाउन व्यवस्थित गरेको छ - तपाईको प्रेमी, त्यसपछि - तिनीहरू आफैले धेरै असल मान्छे हुन् र तपाईं उनीहरुसँग एक साधारण भाषा पाउन सक्नुहुनेछ। आखिर, तिनीहरूका बच्चाहरूको आनन्द उनीहरूको आनन्द हो र उनीहरु पनि चिन्तित छन्, तिम्रो भन्दा कम।
हाम्रो आमाबाबुको साथ प्रिय प्रेम गरौं
एक जना पुरुष र एक केटीको लागि अरु कुनै पनि कम उत्तरदायी र महत्त्वपूर्ण क्षण, दुलहीका आमाबाबुसँग परिचित छ। तपाईंको जवान मान्छेको स्थितिमा पुग्न प्रयास गर्नुहोस्, भर्खरै तपाईं आफैले आफ्नो स्थानमा थिए। पक्का, तिनी चिन्ता पनि छन् र तपाईंको आमाबाबुमा राम्रो छाप बनाउन चाहन्छन्। उनीहरूको बारेमा तिनीहरूलाई बताउनुहोस्, सम्भव छ निषिद्ध विषयहरू वा तपाईंको परिवारको केहि अनौपचारिक बारेमा चेतावनी दिनुहोस्। निस्सन्देह, यो तपाईंको आमाबाबुको अनुमोदन सुन्न महत्त्वपूर्ण छ - उनीहरूलाई आफ्ना प्रेमीको बारेमा केही राम्रो बताउनुहोस्। यस प्रकार, तपाईं यस्तो अग्रिमको लागि उपयुक्त मैदान तयार गर्न सक्षम हुनेछ।
यदि तपाइँ र तपाइँको जवान मान्छेले पहिले नै परिवारको सृष्टिको रूपमा यस्तो गम्भीर कदममा निर्णय गरेको छ र विवाहको मिति पनि पहिल्यै तय गरिएको छ, यो शायद दुलही र दुल्हन को आमाबाबुको पहिलो ज्ञात समय हो। यो बैठकले प्राय: अतिरिक्त बोझ लगाएको छ - आगामी उत्सवको संगठनात्मक पक्षहरूको छलफल। यस अवस्थामा, यो महत्त्वपूर्ण छ कि न केवल डिप्लोयमेसी सम्म सीमित हुनु, तर व्यक्तिगत ज्ञानको बारेमा पनि बिर्सनु हुँदैन, अनुकूल सम्बन्ध स्थापित गर्न। तपाईंको भेटघाटको साझा हितको आधारमा यो बैठकको स्थानमा छलफल गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि, यदि दुबै परिवारहरूले डचालाई मन पराउँछन् र यस्तो अनौपचारिक वातावरणमा धेरै सहज महसुस गर्नेछन्, सम्भवतः सर्वोत्तम ठाउँ प्रकृतिमा देशको छुट्टी हुनेछ। तथापि, एक पिकनिक शशि केबब्स र माछाको साथमा एक सार्वभौमिक विकल्प हो, जुन निश्चित रूपमा परिवारको बीचको बलियो मित्रताको आधार बनाउन मद्दत गर्नेछ।
समापनमा, यो महत्त्वपूर्ण छ कि, आमाबाबुको विचारको बावजुद, तपाईं आफ्नो जीवन साझेदार छनौट गर्नुहुन्छ र, कुनै पनि परिस्थितिको बावजूद, तपाईंको छनौट मात्र तपाइँको आफ्नै प्राथमिकतामा आधारित हुनेछ।
एक महिला संग प्रेम मा एक मानिस को देखो
कसरी मानिसलाई माया गर्न रोक्न?
नि: शुल्क सम्बन्धहरू - के यो छ र के गर्न सहमत छ?
बैगलर - क्यालोरी सामग्री
डाउन जैकेट खाकी
पूर्व प्रिय जिम कार्रे आत्महत्या गरे
पेट गुफा को टाँसन वाला रोग
सुनको स्लिमिङ सुई
के मलहरूले आमालाई नर्सिङ गर्न सक्छ?
कुत्तों को नस्ल
बुना भयो टोपी 2016
जन्म नियंत्रण नियन्त्रण गोल कसरी पिउन?
जुत्ताहरू कस्तो सपना देख्छन्?
जमे भएका गर्भावस्था - परिणामहरू
एलिसन एलिजाबेथ हार्वर्ड
सेन्ट क्याथरीन ठूलो मा के मा मदत गर्दछ?
काठमाडौंको राष्ट्रिय संग्रहालय
वजन घटाने को लागि लाल मिर्च
पोर्क जिगर राम्रो र खराब छ
पर्खिएको: एक अनौठो बार्बीले वास्तविक शरीर अनुपातको साथ सिर्जना गर्यो
Kizilovoe जाम गड्ढे संग - लाभ